အမေရိကန် အိုလံပစ်ကျွမ်းဘားမယ် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိ - Xinhua News Agency
ဂျာမဏီနိုင်ငံ စတုဂတ်မြို့၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက ပြုလုပ်သော 2019 FIG ဂျွမ်းဘားအလှကမ္ဘာ ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီးအသင်း နောက်ဆုံးအဆင့်ပွဲစဉ်တွင် အမေရိကန် ဂျွမ်းဘားမယ် Kara Eakerယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တိုကျို ၊ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ အမျိုးသမီးဂျွမ်းဘားအသင်းမှ အိုလံပစ် အရံကစားသမား Kara Eaker သည် တိုကျိုမြို့အနီး လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတစ်ခု၌ COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ရှိ Eaker သည် အမေရိကန် အိုလံပစ်အသင်းတွင် ပထမဆုံး ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့် ကစားသမား ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။Eaker ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ Mark က ၎င်း၏ သမီးဖြစ်သူသည် တိုကျိုမြို့၏ အရှေ့ဘက် ၃၀ ကီလိုမီတာအကွာရှိ Inzai မြို့ရှိ အသင်း၏လေ့ကျင့်ရေးစခန်း၌ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင် မီဒီယာသို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး Eaker သည် ရောဂါလက္ခဏာ ပြသခြင်း မရှိကြောင်း နှင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝ ထိုးနှံထားပြီးသူ ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
Inzai မြို့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်သည့် Kimiya Kosaku က “အသင်းရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကစားသမားတစ်ဦး ရောဂါပိုးရှိတာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ အတည်ပြုပါတယ်။”ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး အဆိုပါကစားသမားသည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Eaker နှင့်အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သည့် အခြားကစားသမားတစ်ဦးကိုလည်း သီးခြားခွဲထားပြီး ယင်းကစားသမားကို ၎င်း အခန်းထဲ တစ်ဦးတည်း သီးသန့်နေထိုင်စေထားကြောင်း Inzai မြို့မှ တာဝန်ရှိသူ Kimiya Kosaku က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျွမ်းဘားမယ် Eaker ၏ ကိုယ်ရေးနည်းပြ Al Fong ကလည်း ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင် ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါရလဒ်သည် Eaker အနေဖြင့် ပြီးခဲ့သောရက်သတ္တပတ်ကုန်ပိုင်း ဆေးစစ်မှုအဖြေ မှားယွင်းစွာ လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Eaker သည် positive ရလဒ်မထွက်ပေါ်မီက အကြိမ်ကြိမ်ဆေးစစ်ခဲ့ရာတွင် negative ရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဂျွမ်းဘားမယ် Eaker အပါအဝင် အလှည့်ကျကစားသမား လေးဦးသည် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ နှင့် အိုလံပစ်ချန်ပီယံ အမေရိကန် အိုလံပစ်ဂျွမ်းဘားအသင်းမှ ကစားသမားများဖြစ်သော Simone Biles ၊ Jordan Chiles ၊ Grace McCallum ၊ Sunisa Lee ၊ MyKayla Skinner နှင့် Jade Carey စသည့် အမျိုးသမီးကစားသမား ခြောက်ဦး နှင့်အတူ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အလှည့်ကျကစားသမားများသည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိချိန်မှစ၍ အခြားပြိုင်ဘက်အသင်းမှ အလှည့်ကျကစားသမားများနှင့်အတူ တစ်ခန်းတည်း အတူနေထိုင်ကြကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
TOKYO, July 20 (Xinhua) — Kara Eaker, an Olympic reserve on the U.S. women’s gymnastics team, has tested positive for COVID-19 atatraining camp near Tokyo.
Eaker, 18, is the first American Olympian to test positive.
Eaker’s father Mark told media on Monday that his daughter tested positive at the team’s training camp in Inzai, 30 kilometres east of Tokyo, and added she was asymptomatic and had been fully vaccinated for COVID-19.
“We confirmed today thatateen athlete of the team has tested positive,” said Kimiya Kosaku, an Inzai city official, adding that she had arrived in Japan on July 15.
“Another athlete has been categorised asaclose contact and is also staying alone inside her room,” Kosaku said.
Eaker’s personal coach Al Fong also confirmed the positive test on Monday.
The result came after Eaker received what was described asa“false positive” over the weekend. Eaker tookasubsequent test that was negative before testing positive again multiple times.
Four alternates, including Eaker, traveled to Japan with the six-woman U.S. Olympic gymnastics team of world and Olympic champion Simone Biles, Jordan Chiles, Grace McCallum, Sunisa Lee, MyKayla Skinner and Jade Carey.
The alternates have been rooming with other alternates since arriving in Japan, with the competitive team rooming with fellow competitors. Enditem
Photo – Kara Eaker competes during the Women’s Team Final of the 2019 FIG Artistic Gymnastics World Championships in Stuttgart, Germany, Oct. 8, 2019. (Xinhua/Lu Yang)
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တိုကျို ၂၀၂၀ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပရန် ယုံကြည်ချက်ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်ပြော
အစ္စရေးကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီက Apache ရဟတ်ယာဉ်များအတွက် အမေရိကန်စစ်တပ်အား မြင်ကွင်းစနစ်များ ထောက်ပံ့မည်